मुख्य समाचार – Page 12 – Tesro Ankha
‘माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ–नगरमा सिंहदरबार’
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ‘माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ÷नगरमा सिंहदरबार’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले दस वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको जनयुद्धको मुख्य नारा सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा भन्ने साकार भएको र संविधानानुसार नै सात सय ४४ स्थानीय तह खडा गरिएकाले अब ती निकायल...
दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने कुरा आत्मसमर्पणवादी सोच
भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले स्थानीय तहको निर्वाचन देशभर एकै चरणमा गर्नुपर्ने बताएक छन् । नेपाल प्राध्यापक समाजको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई शनिवार भक्तपुरको ठिमीमा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने कुरा निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र भएको बताए । अध्यक्ष बिजुक्छेले स्थानीय तह निर्वाचन हुने मिति घोषणा भई तयारीसमेत भइसकेको अवस्थामा दुई चरणमा निर्वाचन ग...
सिन्धुली । नयाँ शक्ति पार्टी ३ नम्बर प्रदेश संयोजक गङ्गानारायण श्रेष्ठले दलको हैसियतमा निर्वाचन चिह्न नदिइए निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ शक्ति सिन्धुलीको बैठकको निर्णय सार्वजनिकीकरणका लागि शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई दलको हैसियतका आधारमा दलिय निर्वाचन चिह्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आ...
स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रीय नेताको उम्मेदवारी
सल्यान । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सल्यानमा दलहरुले चुनावी सभा तथा घरदैलो कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएका छन् । चुनावी सभा तथा घरदैलो कार्यक्रममा आएको तीव्रतासँगै जिल्लामा चुनावी सरगर्मीसमेत बढेको छ । जिल्लाका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तहमा आगामी वैशाख ३१ गते चुनाव हुुँदै छ । चोकचोक र चियापसलमा उम्मेदवारको चर्चापरिचर्चाले हुन थालेका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि दलले औपचारिक रुपमा...
भेरीको पानी खाने मतदाता भन्छन्– पानी ल्याउनेलाई भोट
सुर्खेत । सिम्ता गाउँपालिका–६ राकमका ६१ वर्षीय रामबहादुर घर्ती आफूले जान्ने भएदेखि भेरीको पानी बोकेर पिउन थालेको बताउँछन् । बाबु, बाजेले पनि यहाँ भेरी नदीको पानी बोकेरै पिएका हुन् उनको भनाइ छ । हिउँदयाम भन्दा वर्षायाममा पिउने पानीको निकै समस्या हुने गर्छ । वर्षायाममा भेरी नदी पूरै धमिलो हुने भएपछि कपडामा पानी छान्दै खानुपर्ने बाध्यता भएको घर्तीको भनाइ छ । छिन्चु जाजरकोट सडकखण्ड यही राकम भए...
तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न ‘बार्गेनिङ’ गर्न नहुने
काठमाडौँ । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तोकिएकोव मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै पनि दलले बार्गेनिङको विषय बनाउन नहुने बताएका छन् । नेता नेपालले निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नौ हैसियत नाप्नुपर्ने सुझाए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी राम्रो काम गरेको भनी सरकारको प्रशंसासमेत गरे । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तुरुन्त गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका उनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि...
उपप्रधानमन्त्री महराको दाबी– तोकिएको मितिमा निर्वाचन
रुपन्देही । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले तोकेको निर्वाचन सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय अनुगमन टोलीले भैरहवामा गरेको लुम्बिनी अञ्चलस्तरीय कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री महराले सरकारले निर्वाचन आयोगदेखि सरोकारबालसँग छलफल गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोकेकाले निर्वाचनप्रति शङ्का नगर्न आग्रह गरे । लामो समयपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन लागेको भन्...
साताभित्र निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ : यादव
काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले छिट्टै छलफल गरी निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता ल्याइने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलवार गरेको साक्षात्कारमा डा. यादवले एक साताभित्र निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गरिने जानकारी दिए। उनले निर्वाचनलाई कसैले कुनै बहानामा रोक्न नहुने बताउँदै अब कुनै हालतमा पनि निर्वाचन हुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार निर्वाचनका लागि २१ ह...
दुई सातापछिको सदन बैठक नबसी स्थगित
काठमाडौँ । दैनिक कार्यसूचीमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुका बीचमा कुरा नमिल्दा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक स्थगन भएको छ । करिब दुई सातापछि मंगलवार अपराह्न १ बजे बस्ने भनिएको सदनको बैठक सत्ता साझेदारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकाबीचमा सो विषयमा कुरा नमिलेपछि विशेष कारण जनाउँदै बुधबार अपराह्न २ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरी स्थगन भएको हो । विशेष गर...
काठमाडौं उपत्यकाको धुलो कम गर्न ‘ब्रुमर’
काठमाडौँ । उपत्यकाका खाल्टाखुल्टी सडकमा भ्याकुम भएको कुचो (ब्रुमर) ले सफाइ गरी धुलो बढारिने भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याएपछि खाल्टो पुरेर ‘ब्रुमर’ले सफाइ गर्न निर्देशन दिएपछि यो यन्त्र प्रयोग गर्न लागिएको हो । पाइप बिछ््याउन सडक खनेपछि राम्रो सफाइ नहुँदा उपत्यकामा धुलो बढेको गुनासो बढेपछि ब्रुमर प्रयोग गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ...